linoo-ayar: အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မွန်ဘိုင်းြမို့ တိုက်ခိုက်ခံရြခင်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မွန်ဘိုင်းြမို့ တိုက်ခိုက်ခံရြခင်း
By သစၥာ | သ​စ္စာ on 9:05 PM သတင်းများ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ စီးပွားေရးအချက်အချာြမို့ြဖစ်သည့် ြမို့ေတာ်မွန်ဘိုင်း(Mumbai)တွင် ေသနတ်သမားများ တိုက်ခိုက်မှုေြကာင့် အနည်းဆံုး လူ(၈၆)ဦး ေသဆံုးခဲ့ြပီး နိုင်ငံြခားသားများကို ဓါးစာခံအြဖစ် ဖမ်းဆီးထားေသာ ဇိမ်ခံဟိုတယ်ြကီး(၂)ခုသို့ လံုြခံုေရးတပ်ဖွဲ့များ ချီတက်လျက်ရိှသည်ဟု (၂၇-၁၁-၂၀၀၈) (ြကာသာပ ေတးေန့)တွင် တာ၀န်ခံအရာရိှများနှင့် မျက်ြမင်သက်ေသများက ဆိုပါသည် ။
ေအာ်တိုမက်တစ်လက်နက်များနှင့် လက်ပစ်ဗံုးများကိုင်ေဆာင်ထားသည့် လက်နက်ကိုင် လူတစ်စုသည် ြမို့ေတာ်ရိှ ဟိုတယ်များနှင့် အြခားေနရာများသို့ တိုက်ခိုက်မှုေြကာင့် ေနာက်နှစ်တွင် ကျင်းပြပုလုပ်မည့် အမျိုးသားေရွးေကာက်ပွဲနှင့် ကက်ရှမီးယားအပါအ၀င် နိုင်ငံ၏ ေရွးေကာက်ပွဲများအတွက် အေြခအေနကို မြငိမ်မသက်ြဖစ်ေအာင် ြပုလုပ်သကဲ့သို့ ြဖစ်သွားပါသည် ။
ရဲများက ေြပာြကားရာ၌ ေသနတ်သမား(၄)ဦးကို ပစ်သတ်ြပီး မသကင်္ာသူ(၉)ဦးကို ဖမ်းဆီးလိုက်ေြကာင်း၊ အြကမ်းဖက်နှိမ်နင်းေရးအြကီးအကဲအပါအ၀င် ရဲ(၁၂)ေယာက် အသတ််ခံရေြကာင်း ြဖင့် ေြပာြကားပါသည် ။ အေြခအေနကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ေသးေြကာင်း၊ မိမိတို့အေနြဖင့် ဟိုတယ်(၂)ခုအတွင်း ကျန်ရိှမည့် အြကမ်းဖက်သမားများကို ရှင်းလင်းေနရေြကာင်း၊ မဟာရပ်ရှ်တာြပည်နယ် ၀န်ြကီးချုပ် H.E. Mr. Vilasrao Deshmukh က ဆိုပါသည် ။ Mr. Deshmukh က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အေြခအေနမှာ မြငိမ်သက်ေသးပါေြကာင်၊ ဟိုတယ် (၂)ခုအတွင်း အြကမ်းဖက်သမားများ ဘယ်နှစ်ေယာက်ရိှသည်ကို ေြပာရန်ခက်ခဲပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကား ပါသည် ။ အေစာပိုင်းက အိန္ဒိယြပည်ထဲေရး၀န်ြကီး H.E. Mr. Shivraj Pati က (၄)ဦးမှ (၅)ဦးစီခန့် ဟိုတယ် (၂)ခုတွင် ရိှမည်ဟု ဆိုပါသည် ။
မွန်ဘိုင်းြမို့ ဗဟိုထိန်းချုပ်ခန်းမှ ရဲအရာရိှြဖစ်သူ P.D.Ghadge က ရိုက်တာသတင်းဌာနသို့ ေြပာြကားရာ၌ အြကမ်းဖက်သမား(၄)ဦးကို အေသပစ်သတ်ခဲ့ြပီး မကင်္ာသူ လူ(၉)ဦးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည် ။ ရိုက်တာသတင်းဌာန မျက်ြမင်သက်ေသက ေြပာြကားရာ၌ Taj ဟိုတယ်ကို အြကမ်းဖက်သမားများက စီးနင်းြပီးေနာက် ရဲများက ၀ိုင်းရံထားေြကာင်း၊ ပစ်ခတ်သံများကို ြကားရေြကာင်း၊ ဟိုတယ်အတွင်းရိှ မီးေလာင်ေနမှုကို မြငိမ်းသတ်နိုင်ေသးေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားသည် ။
ဂျပန်နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးဌာနက အနည်းဆံုးဂျပန်နိုင်ငံသားတစ်ဦး ေသဆံုးြပီး တစ်ဦးမှာ ဒဏ်ရာရရိှခဲ့ ေြကာင်းြဖင့် ေြပာဆိုပါသည် ။ ေတာင်ကိုရီးယားက ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံသား(၂၆)ဦးမှာ ေဘးအန္တရာယ်ကင်းစွာြဖင့် လွတ်ေြမာက်သွားသည်ဟု ဆိုပါသည် ။
ေသနတ်သမားများ ၀ိုင်းရံထားြခင်းခံရေသာ Oberoi ဟိုတယ်တွင် ေပါက်ကွဲမှုများ ြဖစ်ပွားြပီး၊ ေဆးရံုတွင်လည်း ပစ်ခတ်မှုများြဖစ်ပွားလျက်ရိှပါသည် ။ လံုြခံုေရးတပ်ဖွဲ့များ ဟိုတယ်များသို့ ၀င်ေရာက် စီးနင်းေနသည်ကို ြမင်ရေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားသည် ။
ရဲအင်စပက်တာ Ashok Patil က ရိုက်တာသတင်းဌာနသို့ ေြပာြကားရာ၌ အြကမ်းဖက်သမားများက ၎င်းတို့ကို Taj ဟိုတယ်အမိုးေပါ်မှေန၍ လက်ပစ်ဗံုးများြဖင့် ပစ်ခတ်၍ ေရှ့မတက်နိုင်ေအာင် ြပုလုပ်ေနေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားသည် ။
ယခုတိုက်ခိုက်မှုတွင် အနည်းဆံုး လူ (၂၅၀) ဒဏ်ရာရရိှေြကာင်း၊ ဘူတာရံုနှင့် Café Leopold စသည့် နာမည်ြကီးစားေသာက်ဆိုင်နှင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ ကျက်စားရာေနရာများကိုလည်း ပစ်မှတ်ထား ေြကာင်းြဖင့် ရဲများက ဆိုပါသည်။
ယခုတိုက်ခိုက်မှုကို Mujahideen အဖွဲ့က မိမိတို့ြပုလုပ်သည်ဟု ရုပ်ြမင်သံြကားမှ ဆိုပါသည်။ Taj Mahal ဟိုတယ်တွင် လုပ်ငန်းကိစ္စနှင့်ေရာက်ေနသူ ေဟာင်ေကာင်တွင်ေနထိုင်သည့် ြဗိတိသှျလူမျိုး Rakesh Patel က အြကမ်းဖက်သမားများသည် နိုင်ငံြခားသားများကို ပစ်မှတ်ထားပါေြကာင်း၊ အေြကာင်းမှာ ၎င်းတို့သည် စားေသာက်ဆိုင်မှ လာြကြပီး မိမိတို့ကို အေပါ်ထပ်သို့ ေခါ်သွားေြကာင်း၊ အြကမ်းဖက်သူများမှာ လူငယ်များြဖစ်ြပီး အသက်(၂၀)မှ (၂၅)ပတ်၀န်းကျင်တွင်ရိှြပီး ေသနတ်(၂)လက်ကို ကိုင်ေဆာင်ထားေြကာင်းြဖင့် NDTV သတင်းဌာနသို့ ေြပာြကားပါသည် ။
အိန္ဒိယအေနြဖင့် ယခုနှစ်များတွင် မြကာခဏဗံုးများြဖင့် တိုက်ခိုက်ြခင်းကို ခံေနခဲ့ရသည် ။အများဆံုး အေနြဖင့် အစ္စလာမ်အစွန်းေရာက်ြပည်သူ့စစ်များအေပါ် အြပစ်များပံုချခဲ့ြကပါသည် ။ အချို့တိုက်ခိုက်မှုများ ေနာက်ကွယ်တွင် ပါ၀င်နိုင်သည်ဟု ယူဆသည့် ဟိန္ဒူအစွန်းေရာက်သူများကိုလည်း ရဲက ဖမ်းဆီးခဲ့သည် ။
အာရှ၏ အြကီးဆံုးနှင့် အြမန်ဆံုးစီးပွားေရးတိုးတက်လာသည့် မွန်ဘိုင်းြမို့တိုက်ခိုက်ခံရမှုေြကာင့် ရင်းနီှးြမှပ်နှံသူများအေနြဖင့် အထိတ်တလန့်ြဖစ်လျက်ရိှပါသည် ။ Travel Security Expert နှင့် DET Intelligent Risk System ဥက္ကဌြဖစ်သူ Mr. Bruce Mc Indoe က ယခုတိုက်ခိုက်မှုသည် လက်ရဲ ဇက်ရဲ ြပုလုပ်သည့် အြကီးမားဆံုးတိုက်ခိုက်မှုြကီးြဖစ်ပါေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည် ။ ြဗိတိသှျလူမျိုး ေရှ့ေန Mr. Mark Abell က မိမိတည်းခိုသည့် Oberoi ဟိုတယ်တွင် ေပါက်ကွဲသံ (၂)ခုြကားြပီးေနာက် မိမိ၏အခန်းကို ေသာ့ခတ်၍ ေနရသည်ဟု ဆိုပါသည် ။
Taj ဟိုတယ်မှ ဧည့်သည်အေြမာက်အများကို ကယ်တင်လျက်ရိှြပီး၊ အများအြပားမှာ အတွင်းတွင် ကျန်ရိှေနေြကာင်း၊ (၅)ထပ်မှေန၍ အကူအညီများကို ေအာ်ဟစ်ေတာင်းခံလျက်ရိှပါေြကာင်း၊ ပိတ်မိေနေသာ ဧည့်သည်များကို မှန်မှားခွဲ၍ မီးသတ်သမားများက ကယ်တင်ရန် ြကိုးစားလျက်ရိှေြကာင်းြဖင့် မျက်ြမင်သက်ေသတစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
နိုင်ငံြခားသားတစ်ဦးက ြပည်တွင်းရုပ်ြမင်သံြကားဌာနကို ေြပာြကားရာ၌ မိမိတို့အေရးေပါ် ထွက်ေပါက်မှ ထွက်ခဲ့ေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် လူအချို့ကို အြကမ်းဖက်သမားများက အမိုးေပါ်သို့ ေခါ်သွားခဲ့ေြကာင်း ၊ ဓါးစာခံအြဖစ် လူ(၁၅)ေယာက်ကို ေခါ်ေဆာင်သွားေြကာင်း၊ တစ်၀က်မှာ နိုင်ငံြခားသားများြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားသည် ။
စပိန်လူမျိုးတစ်ဦးက ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ေြပာြကားရာ၌ Oberoi ဟိုတယ်တွင်ရိှသည့် စားေသာက်ဆိုင်တွင် မိမိရိှခဲ့ြပီး အတွဲလိုက်ေသနတ်ပစ်ခတ်မှုများ၊ ေသေြကမှုများကို မိမိြမင်ေတွ့ခဲ့ရေြကာင်း၊ ေနာက်တစ်ြကိမ် ယခုလိုအြဖစ်မျိုး မိမိအေနြဖင့် မြကံုေတွ့လိုေြကာင်း ေြပာြကားပါသည် ။ ၀ါရှင်တန်ရိှ အိမ်ြဖူေတာ်နှင့် အေမရိကန်သမ္မတအြဖစ် ေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ြခင်းခံရသည့် Mr. Barack Obama က ယခုတိုက်ခိုက်မှုြကီးကို ရှုတ်ချလိုက်ပါသည်။ အလားတူြပင်သစ်၊ ဥေရာပသမဂ္ဂနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းေရးမှူးချုပ် Mr. Ban Ki-moon တို့ကလည်း ရှုတ်ချခဲ့ြကသည် ။
အိမ်ြဖူေတာ်မှ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုြကီးအတွက် တန်ြပန်အြကမ်းဖက်နှိမ်နင်းေရး၊ ေထာက်လှမ်းေရးနှင့် ကာကွယ်ေရးအရာရိှများကို စုစည်းြပီး၊ အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များထံသို့ အေမရိကန်အစိုးရက အကူအညီများ ေပးအပ်ခဲ့သည်။
ဩစေြတးလျနိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးဌာနက တိုင်းြပည်ရိှ နိုင်ငံသားများကို မွန်ဘိုင်းြမို့သို့ ခရီးမထွက်ေရး နှင့် မွန်ဘိုင်းြမို့တွင် ရိှေနသည့် မိမိတို့လူမျိုးများအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၏ ညွှန်ြကားချက်များ အတိုင်း လိုက်နာ၍ လံုြခံုသည့်ေနရာတွင် ေနထုိင်ရန် ေြကညာပါသည် ။
2 Response to 'အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မွန်ဘိုင်းြမို့ တိုက်ခိုက်ခံရြခင်း'
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/blog-post_26.html?showComment=1227765332944#c4664268224039242858'> November 26, 2008 at 9:55 PM
ဒီသတင်းနှင့် ထုိင်းနုိင်ငံသတင်းေတွကေတာ့ ြကားရတာ စိတ်မေကာင်းစရာပဲ။ ြကားထဲက ြပည်သူေတွကေတာ့ ေြမစာပင် ြဖစ်ရရှာတယ် :(
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/11/blog-post_26.html?showComment=1227888577353#c7726343876709535786'> November 28, 2008 at 8:09 AM